Royal National Hotel, na London | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | ulo, London
Otu n'ime obodo kachasị elu na Europe na ụwa niile bụ London, yabụ onyinye ụlọ nkwari akụ dị ọtụtụ ma dịgasị iche iche. Ma mgbe nke a dị, onye njem oge ụfọdụ na-ajụkarị ajụjụ: ebee ka m ga-ede akwụkwọ? Nke a bụ ụlọ kpakpando atọ na London, ndị Royallọ nkwari akụ Royal London.
Ọ bụ ụlọ nkwari akụ pụrụ iche, nke nwere obi ụtọ na njikọ dị mma na ọdụ ụgbọ elu Heathrow. Tinye mmanya, kọfị na ọbụlagodi ebe a na-eme pizzas. Kedu maka?
1 Royal National nkwari akụ
2 Kedu ihe ị ga-ahụ na họtel ahụ
Royal National nkwari akụ
Hotellọ nkwari akụ a bụ atọ kpakpando Atiya ọ dịkwa na otu n’ime etiti etiti etiti isi obodo Bekee. Emeghe na 1967 ọ na-arụkwa ọrụ n'ụlọ asaa nke China, agbanyeghị na ọ dabara n'oge a weghachiri na 2005 kpam kpam.
Ọ dị na Bedford Way, ihe dị ka minit 25 site na Bloomsbury na ụgbọ ala ọ na-ewe 20 iji banye Victoria Park. Ọ dị n'akụkụ ọdụ ụgbọ okporo ụzọ Tottenham Court nke dị na Tottenham. Ọ dịghị ihe ọjọọ. Ọ dịkwa mita 500 site na British Museum na naanị 350 mita site na Mahadum London, dịka ọmụmaatụ.
Banyere ha uru ndị bụ isi na-enye anyị a ụlọ ahịa kọfị, ụlọ ahịa dị mma, na ụlọ ahịa onyinye, onye na-edozi isi, Free Internet, WiFi .ntanetị, a na-akwụ ụgwọ na-adọba ụgbọala na ụlọ anaghị ese anwụrụ. Gụ ntakịrị ihe m chọpụtara na dị ka ọ dị na England enweghị ụbọchị ọkụ dị ọkụ enweghị ntụ oyi n'ime ụlọ ihi ụra, ọ bụ ezie na enwere mpaghara ndị nkịtị. Afọ ole na ole gara aga, e nwere ebili mmiri na enyi na-ata ahụhụ site na omume a, mana hey, belụsọ ma ị gara n'etiti oge ọkọchị ma eleghị anya ị ga-agbanahụ okpomọkụ ...
N'ihe banyere ime ụlọ, e nwere ụlọ ndị bụ isi nwere akwa abụọ na-alụbeghị di ma ọ bụ akwa akwa abụọ, na WiFi, teres, ebe a na-anọdụ ala, ime ụlọ ịwụ na obere minibar; na ime ụlọ ndi nwere akwa abua eji eji otu. Ime ụlọ niile nwere ebe kpo oku, televishọn na microwave, tii na kọfị na minibar. N’ezie, ọ bụrụ n’ịchọghị ịkọrọ ụlọ ịsa ahụ, gbaa mbọ cheta nke ahụ mgbe ị na-ede akwụkwọ.
Royal National Hotel London na-enye a Nri ụtụtụ kọntinent: ọka ọ ,ụ ,ụ, mkpụrụ osisi, achịcha, tosta, kọfị, tii, ma ị nwere ike mgbe niile na-akwụ ụma na-enwe a ahụkarị Nri ụtụtụ bekee nke zuru oke ma puru iche. Chee echiche banyere akwa, ero, soseji ọbara, tomato ma ọ bụ agwa agwa ... Ma ị naghị akwụ ụgwọ karịa n'ihi na ọ bụrụ na ị gaa ụlọ oriri na ọ onụiaụ n'okporo ámá ọnụahịa ahụ ga-adị elu karịa.
O nwekwara ebe a na-eri nri n’èzí ebe ị nwere ike iri nri, ebe a na-ere mmanya na ebe a na-ere nri na-abụkarị nri ndị China. O nwekwara ebe igwu mmiri, sauna, jacuzzi, mgbatị ahụ na solarium. Nnabata ahụ na-arụ ọrụ elekere 24, enwere ụlọ ọrụ ịkwaga na oche ọlụsị ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-eme njem na anụ ụlọ, ọ bụrụhaala na ị naghị eji nnukwu nkịta eme ya enweghị nsogbu.
Ma ọ bụghị nke a ụlọ mmefu ego na London Ọ na-enye ihe ọ bụla ụlọ nkwari akụ ọ bụla na-enye: nhicha akọrọ, mgbazinye kọmputa, mgbanwe ego, ebe azụmahịa na ọrụ ime ụlọ. Nbanye dị site na 2 n’ehihie ruo elekere 12 n’abalị, ma lelee dị na 11 nke ụtụtụ.
You nwere mmasị na ọnụegoNa-achọ nhọrọ m banyere ụbọchị ọzọ n'izu na abalị ise ụlọ iri na nri ụtụtụ gụnyere o nwere ọnụahịa nke Euro 594 maka ndị okenye abụọ. Site na akwa akwa abụọ na nri ụtụtụ ọnụahịa ahụ ruru 732 euro yana ọkara ọrụ ụgbọ (oge niile maka mmadụ abụọ, abalị ise), euro 871. Roomlọ okpukpu atọ na-efu euro 997.
Lọ nkwari akụ ahụ na-anabata Mastercard, Visa na PayPal dịka ụdị ịkwụ ụgwọ. Echiche? Ọfọn, enwere ihe niile. Atụla anya ihe ịtụnanya, ikekwe ajụjụ ụfọdụ nke nhicha ma ọ bụ nkasi obi nke ohiri isi, mana anyị amatalarị otu a, anyị niile na-ekwu maka otu anyị si eme na ngosi ...
Kedu ihe ị ga-ahụ na họtel ahụ
Dị ka anyị kwuru n'elu Hotellọ nkwari akụ ahụ nwere ebe dị ezigbo mma n'ihi na ọ bụ ihe Central London. N'ezie, echere m na ọ bụ ihe kachasị mma na ya. Ọ bụrụ n'ịchọghị otutu okomoko ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ mara mma mana ihe na-arụ ọrụ ma dị mma, mgbe ahụ ọ bụ nhọrọ kachasị mma.
Nwere ike ịga ije ma ọ bụ were ụgbọ njem ọha na-aga ebe ọ bụla ịchọrọ. Ọ dị nso na British Museum, otu n'ime ndị a ma ama n'ụwa na otu n'ime mkpokọta kachasị mma, ọkachasị n'ihe gbasara Ancient Egypt, mana o nwere ihe sitere na Gris, Rome, Middle East ma ọ bụ America. Nchịkọta ha dị ebube n'ezie. Ihe kachasị mma bụ ịrara otu ụbọchị nleta ahụ, yabụ ịbịaru nso bụ okpukpu abụọ.
Can nwere ike iji eziokwu ahụ bụ na ụlọ nkwari akụ dị nso na enwere nduzi na Spanish. Openslọ ihe ngosi nka mepere na 10 nke ụtụtụ ma mechie na 5: 30pm, yabụ ọ nwere ike ịbụ otu n'ime ebe mbụ iji hụ. N'aka nke ozo bu Okpokoro Oxford, otu n'ime okporo ụzọ na-atọ ụtọ na azụmahịa na England ọtụtụ narị ụlọ ahịa tinyere 200 mita site na Marble Arch na Oxford Circus. Mgbe ị na-eje ije na ya, chee na mmalite ya sitere na okporo ụzọ ndị Rom yana na ọ dịbu otu ụzọ mbata nke obodo ochie nke London.
Ọ bụ ebe a, na Oxford Street, ebe ụlọ ahịa ndị kachasị ewu ewu dịka Uniqlo, H&M, Benetton, Zara, Adidas, Mango ma ọ bụ Topshop dị, naanị ịkpọ aha ụfọdụ mba ụwa. Topshop nwere nnukwu ụlọ ahịa dị narị asatọ na narị asatọ, dịka ọmụmaatụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụlọ nkwari akụ a dị mfe: ọnụ ụlọ kpakpando atọ dị ọnụ ala nke nnukwu uru ya bụ ebe ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị oke iwe banyere ụlọ oriri na nkwari akụ ma ọ bụ mmefu ego gị na-amanye gị ịme mgbanwe, ebe a kwesịrị ya n'ihi ọnọdụ ya dị egwu, na Bedford Way - Russell Square.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » London » Royal National nkwari akụ, London